साउन ८ गतेदेखि छोटो र लामो रुटमा यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको घोषणा
काठमाडौँ । यातायात व्यवसायीहरुले बिहीबारदेखि स्थानीय, छोटो र मध्यम र लामो गरी चारै रुटमा यातायात सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्। मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी साउन ८ गते अर्थात् बिहीबारदेखि छोटो..
सार्वजनिक यातायात बिहीबारदेखि मात्रै चल्ने
काठमाडौं । सञ्चालन कार्यविधिबारे व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभागबीच सहमति जुटेपछि बिहीबारदेखि सार्वजनिक यातायात चल्ने भएका छन्। सरकारले असार २६ गतेदेखि छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि व्यवसायी..
काठमाडौं । सरकारले जिल्लाभित्र मात्र चल्न पाउने गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । उपत्यकामा तीन जिल्लाभित्र तथा उपत्यका बाहिर जिल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक यातायात चलाउने दिने निर्णय भएको..
गाडी नचल्ने भएपछि हवाई भाडा तेब्बरले बढ्यो
काठमाडौं । आन्तरिक उडान गर्दै आएका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भाडा बढाएका छन् । केही दिनअघि सम्म तोकिएको भाडामा ६० प्रतिशतसम्म सस्तो टिकटमा यात्रुहरुलाई उडाईरहेका हवाई कम्पनीहरुले भाडा बढाएका हुन् । पोखराबाहेक..
काठमाडौं । सरकारले लामो दुरीको सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन रोक लगाएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा विशेष सम्बोधन गर्दै लामो दुरीको सवारी साधन चलाउन केही समयका लागि..
काठमाडौं । कोरोनाको त्रासका बीचमा स्कुल कलेज बन्द भएपछि राजधानीबाट आफ्नो घर फर्किनेहरु बसको टिकट काट्न लाइनमा छन् । काठमाडौंका कोटेश्वर, गौशाला, नयाँ बसपार्क, कलंकी, बल्खु, पुरानो बसपार्क, सुन्धारा लगायतका..
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई १३ प्रकारका बिदा, कुन बिदा कति दिन ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले १३ प्रकारका विभिन्न बिदा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै साता जारी गरेको कर्मचारी विनियमावलीमा १३ प्रकारका बिदा पाउने उल्लेख छ..
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले टुटल र पठाओको सेवा नरोक्ने संकेत गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन र उच्च अदालत पाटनको आदेश स्मरण गराउँदै विभागले टुटल र पठाओको..
लोकसेवा आयोगले माग्यो ७३० कर्मचारी, एसईई दिएकाले आवेदन गर्न पाउने, सूचना सहित
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले विभिन्न ७३० पदमा जागिर खुलाएको छ । आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी राजपत्र अनंकिन द्वितीय श्रेणी पदका लागि जागिर खुलाएको हो । खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ती..
ट्याक्सी चालकले घेरेपछि टु्टल र पठाओलाई सेवा बन्द गर्न सरकारको निर्देशन
काठमाडौं । ट्याक्सी व्यवसायीहरुले टुटल र पठाओको सेवा बन्द गर्द माग गरिहेको बेला यातायात ब्यवस्था विभागले अन्य प्रयोजनका सवारीले भाडाको यात्रु बोक्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ। विभागले कानुनको उल्लंघन गरी अन्य..
सरकारले माग्यो १५ सय शिक्षक, लाइसेन्स नचाहिने
काठमाडौं । काम खोजिराख्नु भएको छ भने एउटा खुसीको खबर छ। सरकारले विद्यालयमा पढाउन एक हजार पाँच सय जना शिक्षक खोजेको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शैक्षिक..
काठमाडौं। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट झार उखेल्नेलाई समेत दिएको स्वीकार गर्दै चालु आर्थिक वर्ष त्यस्तो कार्यक्रम नराख्ने घोषणा गरेको छ। गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम झार उखेल्नेलाई समेत दिएको..
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरण र वायुसेवा निगमले एक्कैपटक ठूलो संख्यामा विभिन्न स्तर र पदमा आवेदन मागेको छ। गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापनका अनुसार प्राधिकरणले सहनिर्देशकदेखि जुनियर टेक्निसियनसम्म र निगमले सिनियर क्याप्टेनदेखि लेखा सहायकसम्मको..
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा नयाँ भर्नाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । रिक्त रहेका विभिन्न पदहरुमा खुला प्रतियोगिताद्वारा समावेशी प्रावधानअनुसार पदपूर्ति गर्न एक हजार ८०५ जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको..
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले खुला तथा समावेशी रुपमा पदपूर्ति गर्नेगरी ५४८ नायव सुब्बाका लागि आवेदन खुला गरेको छ। १८ वर्ष पूरा भइ ३५ वर्ष ननाघेकाले आवेदन दिन सक्नेछन्। महिलाको हकमा..
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाइने सहमाति भएको छ। उपत्यकामा यातायात सेवा दिने ३२ वटा कम्पनी, मजदुर र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले उक्त सहमति..
काठमाडौं । जापान रोजगारीमा नेपाली युवाको अपेक्षित सहभागिता हुन नसकिरहेका बेला जापानले झण्डै दुई हजार बढी कामदार लैजाने तयारी गरेको छ । जापान फाउण्डेशनले यही जनवरीमा एक हजार र आगामी..
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २३२ कर्मचारी माग्यो-सूचनासहित
काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले २३२ जना कर्मचारीको लागी विज्ञापन खुलाएको छ । विभागले लोकसेवाबाट सञ्चालन हुने सहायक सुचक पदको लागी खुल्ला र समावेशी गरी २३२ जना कर्मचारी मागेको हो..
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न निकाय, वायुसेवा कम्पनी, फर्म एवं व्यक्तिलाई बक्यौता रकम बुझाउन ताकेता गरेको छ। प्राधिकरणअन्तर्गतको त्रिभुवन विमानस्ठल नागरिक उड्ययन कार्यालयले जरूरी सूचना नै प्रकाशित गरी..
काठमाडौं । वैदेशिक रोजागारीमा जानेले ‘भिजिट नेपाल २०२०’को टिर्सट वा क्याप अनिवार्य लगाउनु पर्ने भएको छ। ‘भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमा आवद्ध सदस्य संस्थाबाट रोजगारीमा..
पार्टी गर्न पाइने बस अब नेपालमा
काठमाडौं । तपाईं पार्टी गर्न कहाँ जानु हुन्छ ? क्लब, डिस्को कि बार ? सामान्यतया पार्टी गर्ने ठाउँ यिनै हुन्। अब भने पार्टी गर्नको लागि यी ठाउँ मात्रै धाउनु नपर्ने..
काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले विभिन्न सेवाका लागि शाखा अधिकृत तहमा १ हजार ९० पदका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । आयोगले ३१९ पदमा आन्तरिक बढुवा र खुलातर्फ ७७१ पदमा विज्ञापन खुलाएको..
काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले विभिन्न जिल्लामा गरी ६०० जना कम्प्युटर अपरेटर माग गरेको छ । विभागले ६ जिल्लाका लागि आवश्यक कम्प्युटर अपरेटका लागि विज्ञापन खुलाएको हो । विभागले..
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ४३८ जनालाई रोजगारी खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । प्राधिकरणको प्रशासन महाशाखाले सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न पदका लागि ४३८ जना कर्मचारी माग गरेको हो..
सशस्त्र प्रहरीद्वारा ठूलो संख्यामा दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले मुख्य दुई पदका लागि ठूलो संख्यामा जनशक्ति माग गरेको छ । सशस्त्रमा रिक्त रहेको साधारण समूह र उपसमूहतर्फ प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा..
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको आकर्षक गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेसियाका लागि कूल ३१ हजार २०१ जना कामदारका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ । नेपाली दूतावास मलेसिायले समेत उक्त माग संख्यालाई प्रमाणकिरण गरी..
एनआईसी एसिया बैंकले ठुलो संख्यामा खुलायो जागिर
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले विभिन्न पदमा जागिर खुलाएको छ । बैंकले विभिन्न ४ वटा पदमा केही संख्यामा जागिर खुलाएको हो । बैंकले उपत्यका र उपत्यका बाहिरका शाखाका लागि ब्राञ्च म्यानेजर..
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ७१७ जनाका लागि जागिर खुलायो
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवि सेवा आयोगले खुला र आन्तरिक गरी ७१७ विभिन्न पदका लागि विज्ञापन खुलाएको छ । आयोगले कर्मचारी पदपूर्तिका लागि खुलातर्फ ५० वटा पदमा, कार्य क्षमताका आधारमा बढुवाका..
काठमाडौं । बहुविवाह गर्ने निजामति कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी सरकारले कानुन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा..
काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रक्रियालाई पूर्णतयाः अनलाइन प्रणालीमा लैजाने योजनाअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभागले आइतबारदेखि श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाटै टोकन लिने व्यवस्था गरेको छ। इ–टोकन अर्थात विद्युतीय पालो प्रणालीले श्रम स्वीकृतिका लागि..
Results 878: You are at page 1 of 30